December 2014 | ပျူနိုင်ငံ
ညီအစ်ကိုလို ခင်တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတောင်းဆို ခဲ့ပါသည်။ "အကို၊ ဂြိုဟ်သားတွေအကြောင်း ရေးပါဦး" တဲ့။ ကျွန်တော် လဲ အဲဒီ၊ UFO (Unidentified Flying Objects) တွေ၊ Aliens တွေ၊ extraterrestrial phenomenon အကြောင်းတွေကို အလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ Internet ပေါ်မှာလဲ မရေမတွက်နှိုင်လောက်အောင် များသော articles, media, video, documentaries ကို လိုက်လံ ဖတ်ရှု လေ့လာ ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆို သူတို့တွေ တစ်ကယ်ရှိလားလို့ မိတ်ဆွေက မေးပါမယ်။
ကျွန်တော့ရဲ့ အဖြေက တော့၊ "ဒီလောက် ကျယ်ပြောတဲ့၊ အဆုံးအစမရှိတဲ့ စင်္ကြာဝလ္လာထဲမှာ ၊ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေပဲ အသိဉဏ်ရှိတဲ့၊ သက်ရှိဆိုတာ ဖြစ်နှိုင်ပါ့မလား။"
ဒါဆို သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်က ဘယ်လို မြင်လို့၊ ဘာတွေများ ပြောချင်သလဲ ဆိုပါရင်၊ အောက်သို့ ဆက်ဖတ်နှိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက၊ သင့် အတွက်အကျိုးမရှိနှိုင်ပါသဖြင့်၊ အချိန်အကုန်မခံပါနှင့်။ ဒီနေရာမှာတင်ပဲ၊ ရပ်လိုက်ပြီး သင့်အတွက် ပို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်ထင်ရာ အခြား စာပေများကို ရှာဖွေ ဖတ်စေချင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဒဘာသာမှာ၊ နတ်အသက် တစ်မနက် လူ့အသက် နှစ်တစ်ရာ၊ လို့ ကြားရဖူးမှာပါ။
ကမ္ဘာကသူ့ ဝင်ရိုးပေါ်မှာ တစ်ပတ်လည်ရင် တစ်ရက်။ နေကို တစ်ပတ်ပတ်ရင် တစ်နှစ်။
စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ကမ္ဘာထက် နေကို အဆပေါင်း တစ်သန်းဝေးတဲ့ အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ ဂြိုဟ်တစ်လုံးဟာ သူ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာ တစ်ပတ်ဖို့ ကမ္ဘာပေါ်က နာရီနဲ့ တွက်ရင် ရက်တစ်သန်းကြာမှာပေါ့။ သူတို့က နေ ကို တစ်ပတ်ပတ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကမ္ဘာက နေကို အပတ်ပေါင်း များစွာ ပတ်ပြီးလောက်ရောပေါ့။ ဒါဆို သူတို့ဆီမှာ သူတို့ရဲ့ တစ်ရက်ဟာ၊ ကမ္ဘာပေါ်က ရက်တစ်သန်း (၁၀၀၀၀၀၀/၃၆၅=၂၇၃၉) ၂၇၃၉နှစ်နဲ့ညီမျှမှာပေါ့။ (ထိုတွက်ချက်မှုသည် တိကျမှုမရှိပါ၊ စာဖတ်သူအနေနှင့် မည်၍ မည်သို့ မည်မျှ ကွာခြားလိမ့်မလဲဆိုသည်ကို မှန်းဆလို့ရအောင် အကြမ်းထဲ့သွင်း တွက်ပြ ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။)
ဒါဆိုမေးခွန်းက၊ ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ နတ်ပြည် ၆ ထပ်၊ ဗြဟ္မာပြည် လေးထပ် ဆိုတာ တွေဟာ အခြားဂြိုဟ်တွေမှာရှိတဲ့ သတ္တဝါ တွေ မဖြစ်နှိုင်ဘူးလား။
ဗုဒ္ဒဘာသာမှာ၊ နတ်သား/သမီးက ကိုယ်ထင်ပြတာ၊ ဗြဟ္မာမင်းက ကိုယ်ထင်ပြတာ တွေ ဘုရားဟောထဲမှာလဲ ရှိပါတယ်။
ယခုခေတ် Alien Contact Report တွေမှာ extraterrestrial beings တွေဟာ၊ ကိုယ်ပျောက်နှိုင်တယ်၊ သူတို့ကလူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့အခါ telepathic communication ပဲလုပ်တယ်။ ပါးစပ်ကမပြောဘူး။
ကိုယ်ပျောက်တာက (visibility vs invisibility) လူသားတွေရဲ့၊ မြင်နှိုင်တဲ့ spectrum ထဲကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ ထွက်လိုက်တာ ပဲကွာပါတယ်။ (Normal human eye can only recognize anything between 390-750nm wavelength of electromagnetic radiation. Anything outside of this spectrum, human simply cannot see.)
ဝါတွင်းသုံးလလုံးလုံး မယ်တော်မာယာ နတ်သားရှိတဲ့ နတ်ပြည်ကို တရားဟောပြီး လူ့ပြည်ကို၊ ရတနာကိုးသွယ် ပျိုးပျိုးပြက်ပြက် စီချယ်ထားတဲ့၊ တန်ဆောင်းမှ မြတ်စွာဘုရား ပြန်ဆင်းလာတာကို၊ ကျွန်တော်တို့လူတွေက တန်ဆောင်မုန်း ပွဲတော်နဲ့ပူဇော် ကျင်းပကြတယ်။
ယခုခေတ် ufologists တွေကတော့ မြတ်စွာဘုရားကို၊ aliens တွေ abduct လုပ်သွားတယ်ပြောနှိုင်စရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြတ်စွာဘုရားကို သူတို့က ခေါ်ပြီး၊ သူတို့မသိတာကို မေးတာ၊ မြတ်စွာဘုရားက သူတို့မသိတာ သံသရာ ထွက်မြောက်ရာ လမ်းကြောင်းကို သွား ဟောပြောတာ ဆိုရင်ကော။
ဒါဆိုသူတို့က သူတို့စီးတဲ့ ပန်းကန်ပြားပျံ လို့ ခေါ်တဲ့ UFO နဲ့ ပြန်လာပို့တာဖြစ်နှိုင်တာပေါ့။ Documents of extraterrestrial beings တွေမှာလဲ တွေရဲ့ abductee/witness တွေက ပျိုးပျိုးပြက်ပြက်နဲ့ အလင်းတန်းကြီး ပန်းကန်ပြားပျံ ပေါ်က ဆင်းလာပြီး လူတွေကို ခေါ်သွားတယ်လို့ ပဲ ထပ်ခါတစ်လဲလဲပြောတာပဲလေ။ ဟိုးခေတ် လေယာဉ်ပျံမရှိသေးချိန်မှာ မိုးပေါ်က ဆင်းလာတာ၊ ပျိုးပျိုးပြက်ပြက်နဲ့ ရောင်စုံ အလင်းတန်းကြီး ကို ရတနာ ကိုးသွယ် စီချယ်ထားတဲ့၊ တန်ဆောင်းလို့ပဲ ပြောစရာ ရှိတော့မှာပေါ့နော်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ၊ လူတွေ သတ္တဝါတွေနဲ့၊ သဘာဝတရားကြီးကို ထာဝရဘုရား သခင်က ဖန်ဆင်းတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ လူတွေဟာ သက်တန်းတစ်လျှောက်မှာ မိမိတို့ရဲ့ ကောင်းမှုမကောင်းမှု လုပ်ခဲ့တာအပေါ်မှာ၊ သေလွန်တဲ့အခါ (Day of Judgment) မှာ ငရဲကို သွားမလား၊ ကောင်းကင်ဘုံကို သွားမလား အဆုံးအဖြတ်ပေးတယ်လို့၊ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
လွိုင်ပိုင်း (Lloyd Pye - Everything you know is wrong - https://www.youtube.com/watch?v=pe6DN1OoxjE) ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်က ချားလ်ဒါဝင်ပြောတဲ့ "လူတွေဟာ မျောက်က ဆင်းသက်လာတာပါ။" ဆိုတာကို မဟုတ်ပါဘူးလို့ အထောက်အထားများနှင့်တကွ ရှင်းလင်းထားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်က လူသားဆိုတဲ့ species ဟာ အစကနဦးကထဲက ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေထဲက တစ်မျိုးမျိုးက evolve ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါ။ extraterrestrial civilization တစ်ခုခုကနေပြီး နဂိုရှိနေတဲ့ သတ္တဝါတွေထဲက တစ်မျိုးမျိုးကို genetically engineer လုပ်ပြီး genetically modify လုပ်ထားပြီး မွေးယူထားတဲ့ new non-native species ပါလို့ ပြောပါတယ်။
အချို့သော ufologists တွေကလဲ aliens တွေဟာ၊ သူတို့နဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေထဲက တစ်မျိုးမျိုးကို မျိုးစပ်ပြီး၊ hybrid မွေးထုတ်တယ်။ တစ်ချိန်မှာ သူတို့ ဂြိုဟ် က ပြက်သုန်းတဲ့ အခါ၊ သူတို့က ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေဖို့ adaptable/adoptable ဖြစ်အောင် လို့ လုပ်တာ hybrid တဲ့။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေက သူတို့ မျိုးစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လူတွေကို generations အလိုက် abduct လုပ်ပြီး လေ့လာတယ်၊ တိုးတက်မှုတွေကို sample ယူတယ်။ သူတို့ observe/watch လုပ်ထားတဲ့ မိသားစု က မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကို အ၊မြဲစောင့်ကြည့် watch လုပ်တယ်၊ periodically sample တွေယူတယ်၊ အဲဒီလူတွေရဲ့ တိုးတက်မှုကို research/observe လုပ်တယ်။ (Project Blue Book Disclosure - Edger Mitchell - https://www.youtube.com/watch?v=9tKWElDHhY4)
သူတို့ abduct လုပ်ခံရတဲ့ လူတိုင်းရဲ့ detail reports တွေတိုင်းမှာ၊ သူတို့ဟာ အချိန်တစ်ခု ဆုံးရှုံးကြတယ် (time lost)။ ဥပမာ၊ abduct လုပ်ခံရသူက သူ့စိတ်ထဲမှာ တခဏလေး၊ မျက်စေ့တစ်မှိတ် လို့ ထင်ရပေမဲ့၊ သူ ပျောက်သွားတဲ့ အချိန်က နာရီပေါင်းများစွာ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ (https://www.youtube.com/watch?v=q9FRZPH5FOk)
ဒါဆို ဒီ aliens တွေက လူတွေကို created/genetically engineered လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ ကြက်တွေ ဝက်တွေလို ကမ္ဘာဆိုတဲ့နေရာမှာ ခြံခတ်ပြီး မွေးထားတယ်။ သူတို့က လူတွေကို အသက်စဝင်ကထဲက တစ်ယောက်ချင်းစီ စဉ်းစား ဆင်ချင်ဉဏ်တော့ ပေးထားတယ်၊ framework တစ်ခု level of IQ တစ်ခုကို မကျော်နှိုင်အောင် လုပ်ထားတယ်။ (သူတို့က လူရဲ့ ဦးနှောက်ထဲအထိ ဝင်ရောက် intrude and rule လုပ်နှိုင်တာကိုး)၊ လူတွေ ရဲ့ မျက်စေ့ကို limited visibility spectrum လုပ်တဲ့ အခါမှာ သူတို့လို existence ကို သူတို့ ပေးတဲ့ visibility မှာပဲ မြင်နှိုင်အောင် limit လုပ်ခဲ့တယ်။ အခါအားလျော်စွာ သူတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူကို ဖမ်းပြီး စစ်ဆေးတယ်၊ နမူနာယူတယ်။ ပြီးရင် လူတွေ မသိရအောင် အဲလို examination လုပ်လို့ ကြာတဲ့ အချိန် (တစ်နာရီ ဆိုပါစို့) ကို သူ မမှတ်မိနေအောင်၊ သူ့ရဲ့ ဦးနှောက်မှတ်ဉဏ်ထဲက အဲဒီ အချိန်ပိုင်း မှတ်မိနေတာကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်၊ ပြီးမှ အရှေ့ပိုင်း မှတ်ထားတာနဲ့ နောက်ပိုင်း မှတ်ထားတာကို tape recorder တွေ ဖြတ်ဆက်သလို လုပ်ပေးလိုက်တော့၊ တစ်ကယ်အပြင်မှာ အချိန်တစ်နာရီ ကြာပေမဲ့၊ အဲဒီလူရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ တစ်စက္ကန့်ပဲလို့ မှတ်မိနေတယ်။
ဟော့ လူတွေသေတော့၊ သူတို့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်က ဘယ်လော၇် evolve ဖြစ်သလဲ ဆိုတဲ့ research အတွက်၊ သူတို့ကို သူတို့ရဲ့ မြင်ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို စွန့်ပစ် (decayed biological body)၊ မမြင်ရတဲ့ အပိုင်း soul or existence invisible to human eye ကို သင့်ရာနေရာမှာ မှာ သွား သိုလှောင်ထား (stock in corresponding place at the judgment day as we human know) တာ မျိုး။
တိုက်ဆိုင်မှုက၊ ဗုဒ္ဒဘာသာမှာ လဲ၊ ကိုယ်စောင့်နတ်၊ လမ်းစောင့်နတ်၊ မြို့စောင့်နတ် တို့ဘာတို့ ရှိတယ်လေ။ အကယ်၍များ aliens တွေက လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါတွေကို ခြံခတ်မွေးသလို မွေးနေတာဆိုရင်၊ ဒီဟာတွေက အသီးသီး စောင့်ကြည့်ရန်တာဝန် ကျတဲ့ aliens တွေ သူ့နေရာနဲ့၊ သူ့ assignment နဲ့သူ၊ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်ဝါကို စောင့်ကြည့်ဖို့ တာဝန် ပေးထားတဲ့ aliens တွေ ဖြစ်နေနှိုင်တာပေါ့။
Aliens တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း၊ abduction & time lost အကြောင်းတွေကို စီကာပတ်ကုံးရေးရမည်ဆို လျှင် ကုန်မည် မထင်ပါ။ Abduction reports တွေထဲက အထင်ရှားဆုံးက တော့ Betty နဲ့ Barney စုံတွဲ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ (https://www.youtube.com/watch?v=cCVsPlRKgTc)
ခုလို ရေးလိုက်တော့ လန့်သွားသလား။ စာရေးသူဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာ အယူအဆအပေါ်မှာ မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်နေတဲ့ မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိလား လို့ မေးစရာရှိပါတယ်။
မဟုတ်ပါ။ လားလားမျှ မဟုတ်ပါ။ စာရေးသူဟာ၊ ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်း၊ ဆက်စပ်တွေးတော၊ လေ့လာသုံးသပ်၊ တွေးခေါ် မြော်မြင် ပြီး အမှန်တရား ကို ရှာဖွေနေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ (If you areamovie fan - you can learnalesson called "Think out of box" from the movie - "Chicken Run" animated movie)
လောကသစ္စာတရားများတွင် - သိပ္ပံပညာဆိုတာ မရှိပါ။ ဝိဇ္ဇာပညာဟူ၍လဲ ခွဲခြား မခေါ်ဝေါ်ပါ။ နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ရှူထောင့်ဆိုတာမရှိသလို၊ ဘာသာရေးအမြင်နဲ့ ကြည့်မှသာ အမှန်တရားကို တွေ့နှိုင်သည်ဟူ၍လဲ မသိပါ။
အမှန်တရားသည်၊ အမှန်တရားသာဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တရားကို အရှိအတိုင်း ကြည့်ရှုသိမြင်ခြင်းကိုပဲ "ဝိပသနာ ရှုခြင်း" ဟူခေါ်ပါသည်။
ဟုတ်ပါပြီဗျာ၊ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဂြိုဟ်သား မျိုးစပ်တွေချည်းပဲပေါ့။ ဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဟား ဂြိုဟ်သားတွေချည်းပါပဲဗျာ။
ကိုအေးမောင်က တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် (တိုင်) သား။
ကိုရဲခင်က ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သား(တိုင်) သား။
ဂြိုဟ်သား - ၂။
အစ်ကို တစ်ယောက်က ဂြိုဟ်သား သရဲ အကြောင်း ရေးပါတဲ့။
Alien Interview တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ Youtube ပေါ်မှာ video clips များစွာရှိပါတယ်။ ထူးခြားပြီး ထွက်လာတာက Alien နဲ့ interview via telepathic communication လုပ်တဲ့ video clips ပါပဲ။ အများကြီးထဲက နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပဲ (authentic) အမှန်အကန် ဖြစ်လောက်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
အဲဒီ UFO Literature ထဲက အဆိုအရ၊ ခု interview လုပ်တဲ့ alien တွေကပြောတယ်။ သေခြင်း ဆိုတာ life form တစ်ခုကနေ အခြား တစ်ခုကို transport လုပ်တဲ့ သဘောပဲမို့၊ ကြောက်စရာလို့ မယူဆကြတဲ့ သဘော။ ( Project Blue Book - https://www.youtube.com/watch?v=oZanQvY6agE)
(Project Majestic - https://www.youtube.com/watch?v=n6avkd1Tm1I)
ဒါကို လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ၃၁ ဘုံ ကျင်လည်ကြတာနဲ့ တူပါတယ်။
စဉ်းစား နှိုင်တာ က ဒီ aliens တွေဟာ ခုမြင်နေရတဲ့ life form ကို ရော၊ နောက်ဖြစ်သွားတဲ့ lie form ကိုပါ ဒိုးယိုပေါက် မြင်နေရတဲ့ အသိဉဏ်မျိုး ကို ရှိတဲ့ inteligence species မျိုး ဆိုရင် (ဘုရားပြောတဲ့ နတ်တွေများ ဖြစ်နေရင်)၊ သူတို့အတွက် သေရတာဟာ၊ ဧည့်ခန်းထဲက နေ အခြားအခန်းထဲ ဖြတ်လျှောက်တာလိုပဲ ဖြစ်မှာမို့ ကြောက်စရာ မလို သလို၊ အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ပါ။
တစ်ကယ်ဆို လူတွေက အလွန် အမြင်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ species ပါ။ ခွေးတွေဟာ၊ လူတွေ မြင်နှိုင်သမျှ lifeform (visible spectrum) အားလုံး (လူ၊ တိရိစ္ဆာန် မျိုးစုံ) အပြင် အခြား ဘုံ (life form) တွေ (ဥပမာ ပြိတ္တာ၊ သရဲ၊ ဘာတွေပါဦးမလဲ မသိပါ) ကိုပါ မြင်နှိုင်ကြတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် မှန်းဆကြည့်နှိုင်တာက၊ life forms တွေ အားလုံးကို အကောင်းဆုံး၊ အမြင့်ဆုံးကနေ တန်းစီချလိုက်လို့ရှိရင်၊ သူတို့က လူတွေမြင်နှိုင် သမျှ visible spectrum၊ အပြင် လူဆိုတဲ့ life form ထက် နိမ့်တဲ့ အချို့သော ဘုံသား (life form) တွေကို ပါ မြင်နှိုင်တယ်ပေါ့။
အချို့သော အကျင့်၊ သီလ နှင့် ပြည့်စုံပြီး ကျင့်ကြံအား ထုတ်ထားသော အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်နေသော ဆရာတော် ကြီးတွေ၊ သာမန်လူ အချို့ ရဲ့ ကျင့်ကြံမှု ကြောင့် သူတို့ရဲ့ visibility (or) visible spectrum ဟာ သာမန်လူတွေ ထက်စာရင် ပိုမြင်ရလာပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော် လူ့ဘုံ အပြင် ပိုမြင့်သော ဘုံ သားတွေ၊ ပိုနိမ့်သော ဘုံသားတွေ ကို ပါ မြင်နှိုင်လာတာကို၊ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လက်တွေ ကြုံတွေ ခဲ့ရဘူးပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ စကားနဲ့ ပြောရင် ပို ရှင်းနှိုင်ပါတယ်။ စက်တစ်လုံးကို start-up လုပ်ပြီး၊ applications တွေ အများကြီး ဖွင့် လိုက်၊ ပိတ်လိုက်၊ တောက်လျှောက်လုပ်လာတာ ကြာတော့၊ စက်ရဲ့ memory ဟာ ညစ်ငြမ်းလာတယ်။ ဗမာတွေက "စက်လေးလာပြီ။" လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါဆို run ရတာ သိတ် efficient မဖြစ်တော့ဘူး။ reboot လုပ်လိုက်ရင် အားလုံး အကောင်းပကတိ အတိုင်း ဖြစ်သွားပြီး ကောင်းကောင်း run နေပြန်ရော။
ဒါဆို reboot လုပ်ခြင်းက စက်ရဲ့ memory ကို လုံးဝ reset လုပ်တာ (သို့) ဘဝတစ်ပါး ပြောင်းသွားတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သေလွန်တော့ အရင်ဘဝက အကြောင်းကို မသိတော့ဘူး။
အဲ hard drive ထဲ၊ C: DRIVE ထဲ သိမ်းထားတာကျတော့၊ မပျက်သွားပါဘူး၊ reboot လုပ်ပြီးလဲ ရှိနေတုန်းပါဘဲ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ က ကံကံ၏ အကြောင်းအကျိုးတရားလို့ နားလည်တယ်နော်။
အရင်က ရှိတဲ့ Windows 98 နဲ့၊ files & folders တွေအားလုံး အရင်အတိုင်း ရှိတယ်။ ဟုတ်တယ်။ မိမိ ပြုခဲ့တဲ့ ကံက ဘဝ ပြောင်းသွားပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အကျိုးဆက်က လိုက်လာတယ်။
ဒါကို ပိုကောင်းသွားအောင် ကျွန်တော်တို့က Windows 98 ကနေ Windows 8 ကို ပြောင်းတင်တယ် upgrade လုပ်တယ်၊ version အမြင့်ကို ပြောင်းတယ်။ မပြောင်းသ၍ အဟောင်းအတိုင်း ကောင်းတဲ့နေရာမှာ ကောင်းတယ်။ မကောင်းတဲ့ corrupted files and software တွေကလဲ အရင်လိုပဲ ရှိမြဲရှိတယ်။
ဒီလို upgrade လုပ်တာ ဒီထက် ကောင်းတဲ့ version ကို တင်တာက လူ့လောကမှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာပေါ့။ မကောင်းတဲ့ malware, virus တွေ ဘာတွေများ မှားဝင်လာရင် ရှိရင်စွဲလေးတောင် corrupted (or) crash ဖြစ်တယ်၊ ဒါကို အပါယ်ကျတယ်၊ အကုသိုလ်သိုလ်လုပ်တာလို့ မြင် နှိုင်တာပေါ့။
ကွန်ပျူတာမှာ task manager ကနေ applications or process တွေကို kill process/es လုပ်တာကိုတော့၊ လူတွေအိပ်တာနဲ့ နှိုင်းလို့ရတာပေါ့။ မလိုတာတွေအကုန်ပိတ်၊ ဒါပေမဲ့ Windows kernel ကတော့ run နေတုန်းပဲလေ။
ဟော့၊ UNDELETE လို၊ Recover My Disk လို software မျိုးကို install လုပ်လိုက်ရင်၊ အရင်က format လုပ်ပြီးသား၊ files & folders တွေကို ပြန် ဖော်နှိုင်တယ်။
ဟော့၊ Predictive dictionary (android) လို software မျိုး တင်လိုက်ရင်၊ ကျွန်တော်တို့ အက္ခရာ တစ်လုံး စရိုက်တာနဲ့၊ သူက မင်း ဒီစာလုံး (သို့) ဟိုစာလုံး ရိုက်ချင်တာလား၊ အဲထဲက မင်းရိုက်ချင်တာကို ရွေးလို့ရတယ် ဆိုပြီး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေတယ်။
လူ့ဘဝမှာတော့ ဒါတွေဟာ၊ အရှေ့ဘဝကို ပြန် မြင်နှိုင်တာမျိုး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုကောင်းအောင် ကျင့်ကြံတဲ့အခါ၊ ပိုရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ၊ အနာဂါတ်ကို ပို မှန်းဆနှိုင်လာတယ်။ ဒီထက် မြင့်ရင်၊ ရှေ့ဘာဖြစ်မလဲ ကြို predict လုပ်နှိုင်လာတယ်။ လို့ စိတ်ထဲ သဘောပေါက်လာမှာပါ။
ဒီတော့ ရေးရခြင်းရဲ့ အကြောင်းကို ပြန် ကောက်ရပါရင်၊ "သရဲ" ဆိုသော အသုံးအနှုန်း၊ အခေါ်အဝေါ်မှာ လူဆိုသော ဘုံသား တွေ၊ terminology တစ်ခု ပါ လူဆိုတဲ့ life form ကို ရရှိပြီး၊ သေလွန်တဲ့ အခါ အခြား ဘုံ (life form) တစ်ခုကိုရောက်သွားပေမဲ့လို့၊ အရှေ့ most recent ဘုံရဲ့ မကောင်းတာတွေ ကို unable to off load from memory လုပ်နေသ၍ အဲဒီကနေ အခြား ကို ခရီး မဆက်နှိုင်ဘူးပေါ့။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့အမြင်ကတော့၊ သရဲ ဆိုတာဟာ လူ ဆိုတဲ့ ဘုံသားတွေအတွက်ပဲရှိပြီး၊ လူထက် အသိဉဏ်ပိုမြင့်တဲ့ ဘုံသားတွေအတွက်ကတော့၊ သရဲ လို ဟာမျိုးကို၊ လူတွေက ကိုယ့်ထက်နိမ့်တဲ့ ခွေးကို မြင်နေရသလိုပဲ ဒိုးယိုပေါက် မြင်နေရမှာမို့၊ ကျွန်တော်တို့ လူတွေရဲ့ အာရုံထဲက သရဲ ဆိုတဲ့၊ scary feeling, frighteness မျိုးနဲ့ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုအောင်ခင်မြင့်ရဲ့၊ သရဲအကြောင်း စာစောင်များနှင့်၊ articles and blogs များ၊ alien ဈေးကွက်တွင် အရောင်း တွင်ကျယ်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ဘယ်ရောက်ရောက်၊ ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ် "လုပ်မှာပဲ" စီးပွါးရေး ပညာရှင် "အိစံကွား" က ကောက်နှုတ်ချက်ချနှိုင်ပါကြောင်း။။
အပျော်သဘောရေးတာမို့ ငြိစွန်းတာ၊ ရှိသွားပါရင်၊ စိတ်မဆိုးဖို့ ကြိုတင်တောင်းပန်ပါရစေ။
ဟို တစ်လောလေး တုန်းကတော့ ရေအောက်က ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်သွားတဲ့၊ ခေါင်းလောင်းပုံ UFO ကြီးကို ရေအောက်က "နဂါး" မီးပူဇော်ကြသေးတယ်လေ။
ကဲကဲကဲ၊ aliens တွေကို pyramid ပေါ် တက်ပြီး မီးပူဇော်လိုက်ဦးမယ်။
ဂြိုဟ်သား - ၃။
(သူငယ်ချင်းက လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါကို ဗြိုဟ်သား (exterrestrial civilization) တွေ က engineered လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ သက်သေပြပါလို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။)
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘယ် ဂြိုဟ်သားကိုမှ မျက်မြင် မတွေ့ဖူးတော့ သက်သေ မပြနှိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့၊ လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါကို exterrestrial civilization တစ်ခုခုက engineered လုပ်ခဲ့သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ရော ဘယ်လို ထင်သလဲ လို့ မိမိ စဉ်းစားကြည့်ရမယ် ဆိုရင် ----- အောက်ကအတိုင်းပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ကမ္ဘာ ဂြိုဟ် (Planet Earth) ဟာ သက်တန်း အားဖြင့် နှစ် သန်းပေါင်း ၄.၅၄ ရှိပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့သော နှစ် နှစ်ရာအတွင်း မှာမှ လူသားတွေဟာ လေထဲကို ပျံနှိုင်တဲ့ လေယာဉ်ပျံကို စတီထွင်နှိုင်တာပါ။
ရေနွေးငွေ့ အင်ဂျင်ကို စတီထွင်လာနှိုင်ခဲ့တာပါ။
နောက်ပြီး ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ရှိသမျှ civilizations တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် အနှစ် တစ်သောင်းမကျော်သေးပါဘူး။
ဒါဆို အဓိက မေးစရာ မေးခွန်းက နှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း ၁) ဒါဆို ကမ္ဘာ စ တည်ကထဲက နှစ် သန်းပေါင်း သန်းပေါင်း ၄.၅၄ မှာ နှစ် တစ်သောင်း နှုတ်ရင်၊ အနှစ် သန်းပေါင်း ၄.၅၃ ရပါတယ်။ အဲဒီလောက်အချိန်တွေမှာ လူဆိုတာ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင်၊ ဘာလို ဘာမှ မတိုးတက်နှိုင်တာလဲ။
မေးခွန်း ၂) ဘာလို အနှစ် ၄ သန်း မျောက်လောက် အသိဉဏ်နဲ့နေလာပြီး နောက်ဆုံး နှစ် တစ်သောင်းလောက်ကျမှ ရုပ်တရက်ကြီး ထ တိုးတက် တီထွင်လာနှိုင်တာလဲ။
ပထမမေးခွန်းကို စဉ်းစားကြည့်ရင်၊ စာဖတ်သူက Liyed Pie ပြောတဲ့၊ "လူဆိုတဲ့ အသိဉဏ် သတ္တဝါ ဆိုတာ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နဂိုထဲက ရှိနေတဲ့ ရှေးဦး သက်ရှိတွေ (native species of planet earth) ထဲက နေ human species ဖြစ်လာတာ မဖြစ်နှိုင်ဘူး။" ဆိုတဲ့၊ အယူအဆဟာ သဘာဝ ကျတာ၊ လက်ခံနှိုင်စရာ ဖြစ်လာမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့၊ နဂိုရှိနေတဲ့ native species of planet earth ထဲက နေ လူဖြစ်လာတာဆိုရင်၊ နှစ်ပေါင်း သန်း ၄.၅၄ အတွင်းမှာ နောက်ဆုံးအနှစ် နှစ်ရာကျမှ စောစောကြီးကထဲက လူတွေဟာ တီထွင်နှိုင်ရမှာပေါ့။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ အနှစ် နှစ်ရာအတွင်းမှာ ဒီလောက် တီထွင်မှုတွေ လုပ်နှိုင်ခဲ့တယ် ဆိုရင်၊ အရင် အနှစ် ၂ သန်း အတွင်းမှာ အခု တီထွင် နှိုင်တာတွေထက် အဆပေါင်း (၂၀၀၀၀၀၀/၂၀၀) ၁၀၀၀၀ တိုးတက် တီထွင် ထားတဲ့ civilization တစ်ခု ရှိသင့်နေပြီပေါ့။
ဒုတိယမေးခွန်း ကို စဉ်းစာကြည့်ရင်၊ အနှစ် ၄ သန်းကျော် နလပိန်းတုံး နေလာတဲ့၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နဂိုထဲက ရှိနေတဲ့ ရှေးဦး သက်ရှိတွေ (native species of planet earth) တွေက ဘယ်လို အသိဉဏ်နဲ့များ နောက်ဆုံး အနှစ် တစ်သောင်းလောက်ကျ မှ ရုပ်ချည်း evolve ထဖြစ်ပြီး တီထွင်မှုတွေ လုပ်နှိုင်ရတာလဲ၊ ဖြစ်နှိုင်ပါသလား။ တစ်ဖြေးဖြေး evolve ဖြစ်လာတာဆိုရင်၊ လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၃ သန်းလောက်ကထဲက လူတွေ ဟိုဟာလေး ဒီဟာလေး စ တီထွင်လာတာ တွေ့ရမှာပေါ့။ ခုလို ရုပ်တရက်ကြည့် ရွှေဉဏ်တော် စူးရောက် သွားတယ်ဆိုတာ၊ သဘာဝမကျတာ ကို သတိထားမိမှာပါ။
အဲဒါက Charles Darwin ရဲ့ Missing Link ပါပဲ၊ ကွင်းဆက်ပြတ်နေတာပါ။ ဒီ Missing Link ကို၊ ခုချိန်အထိ Charles Darwin အပါအဝင်၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဖြေရှင်းချက်မပေးနှိုင်သေးပါဘူး။
တစ်ဖက်မှာ Reported Records Exterrestrial Encountering တွေထဲက အထင်ရှားဆုံး နိုင်ငံတကာ လုံးဝ ငြင်းမရတဲ့၊ reports တွေထဲက Betty & Barney Hills ရဲ့ အတွေ့အကြုံမှာ၊ Betty ဟာ သူတွေ့ကြုံရတဲ့ ဂြိုဟ်သား ဆွဲပြတဲ့ သူတို့ရဲ့ဌာနေ ကို ဆွဲပြတဲ့ Zeta Reticuli Planet (star system map) ဆိုတာဟာ ယခုဆို အနှစ် သန်းပေါင်း ၃၀ သန်းကျော် ရှိပါပြီ။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Barney_and_Betty_Hill) ဒီ star system map ကို သိပ္ပံပညာရှင် တွေကို ဆွဲပြ တုန်းက ၁၉၆၀ ကျော်ပါ။ အဲဒီတုန်းက အဲဒီ star system map ကို သိပ္ပံပညာရှင် မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး။ နောက် ၁၀ ကျော်ကြာပြီး နက္ခတာရာကြည့် မှန်ပြောင်းမှာ အားကောင်းလာသော အချိန်ကျမှ သူတို့က Betty ဆွဲပြသော star system map & Zeta Reticuli Planet ဟာ တစ်ကယ်ရှိနေတာကို သိလာရတာပါ။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ အနှစ် ၄ သန်းကျော်မှာ ဒီလောက်တိုးတက်နှိုင်ရင်၊ အနှစ် သန်း ၃၀ ကျော်ရှိတဲ့ civilization တစ်ခုဟာ ဘယ်လောက် တိုးတက်လိမ့်မလဲ မှန်းလို့ရပါမယ်။ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲမှ ယုံကြည်စရာမလိုပါဘူး။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ က လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် လေးသန်းမှာ အသိဉဏ် တိုးတက်မလာတဲ့ အတွက် ဒီ တိုးတက်တဲ့ civilization က သတ္တဝါ တွေက ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေကို နဂို အသိဉဏ်မရှိသလောက် ဖြစ်နေတာကနေ၊ အသိဉဏ်ရှိနှိုင်အောင်၊ geneticaly engineered လုပ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နည်းလမ်းတွေ ပေး ဉဏ်ဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လာပြီး shared knowledge ပေးသွားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးသွားတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ လက်ခံနှိုင်စရာ ရှိ၊ သဘာဝ ကျသလို ဖြစ်နေမှာ ပေါ့။
အဲဒီလိုပဲ၊ အဲဒီ civilization တွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ နဂိုထဲက ရှိနေတဲ့ ရှေးဦး သက်ရှိတွေ (native species of earth) တွေကို သူတို့ရဲ့ မျိုးနဲ့ စပ်ပြီး hybrid တစ်ခု အနေနဲ့ လူဆိုတာကို genetically engineer လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာလဲ လက်ခံနှိုင်စရာရှိတာပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လူဆိုတဲ့ species ရဲ့ anatomy design က ကမ္ဘာပေါ်မှာသာ ရှိတယ် အသိဉဏ်ရှိတာကလွဲပြီး၊ ကမ္ဘာရဲ့ ရာသီတု၊ အန္တရယ် အဝဝ ကို ကြံ့ကြံ့ ခံနှိုင်တဲ့ anatomy design မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်စဉ်းစားစရာ ရှိတာက အချိန် timeline ကို ကြည့်ရင်၊ အနှစ် ၄ သန်းကျော်လာပြီး မှ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ လောက်ကမှ pyramid တို့၊ civilization တို့ စပေါ်လာတာမို့လား။ အရှေ့ပိုင်းမှာ လူဆိုတာ မရှိဘူး။ လူရယ်လို့ evolve မဖြစ်လာနှိုင်တဲ့ နဂို ဒေသခံ မျောက်လို သတ္တဝါ တွေသာရှိခဲ့တယ်။ အဲ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ကြားကျမှ ဒီအသိဉဏ်တွေ၊ ရောက်လာတယ် ဆိုတာ external or extraterrestrial knowledge တစ်ခုခုက ထဲ့ပေးသွားတယ်ဆိုတာ အရမ်း ဖြစ်နှိုင် တာပေါ့။
ဒါတွေဖတ်ပြီးတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာတွေကလဲ၊ တို့ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာ ဘုရားရှင် ဟောကြားတဲ့ ၃၁ဘုံနှင့်၊ သံသရာကို အယုံအကြည်မရှိသူ၊ မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေဖတ်ပြီးတော့ စာဖတ်သူက၊ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာ ဘုရားရှင်လဲ လူစဉ်စစ်ပဲမို့၊ သူ့ကို လဲ exterrestrial species (or) aliens တွေက ဖန်ဆင်းခဲ့တာမို့၊ ဘာလို့ ဗုဒ္ဒဘာသာ ကိုးကွယ်စရာ လို့တော့မလဲ၊ aliens ပဲ ကိုးကွယ်တော့မှာပေါ့လို့ ထင်သွားစရာရှိမှာပေါ့။
အကယ်၍သာ တစ်ကယ်ပဲ လူဆိုတဲ့ သတ္တဝါကို () တွေက () လုပ်ခဲ့တာ လို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ။
ဗုဒ္ဒမြတ်စွာ ဘုရားရှင်လဲ လူစဉ်စစ် ဖြစ်တာမို့၊ aliens တွေ တီထွင်ခဲ့တဲ့ လူသတ္တဝါဆိုတဲ့ life form ဖြစ်ပေမဲ့ ပါလာတဲ့အသိဉဏ်ကို develope (or) cultivate လုပ်ရာက aliens မသိသေးတဲ့ နောက်ထပ်အသက် ဆိုတာ ဆက်မဖြစ်တော့တဲ့ formula (way) ကို သိမြင်သွားတယ်လို့ စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဒမြတ်စွာ ဘုရားရှင် ဟောတာက "ငါ" ဆိုတဲ့ ဂေါတမ က အရေးမကြီးပါ၊ ကိုးကွယ်ရာအမှန်က ဓမ္မဆိုတဲ့ knowledge/wisdom ပါ။
ဗုဒ္ဒမြတ်စွာ ဘုရားရှင်ကို ရှိခိုးကန်တော့တာက သူက သံသရာ က လွတ်မြောက်ရာ (liberation from the framework of death and rebirth) ကို ကျွန်တော်တို့ကို သိမြင်စေလို့ သူ့ရဲ့ ကျေးဇူး (gratitude) ကို ကန်တော့တာပါ။
ဓမ္မ ဆိုတဲ့ သစ္စာလေးပါး တရား ဆိုတဲ့ knowledge/wisdom ကို အမြဲတမ်း မိမိတို့ရဲ့ အလင်းရောင်ပြတဲ့ လမ်းညွန် အနေနဲ့ ဆည်းကပ်တာပါ။
သံဃာတွေဟာ (စစ်မယ်ဆိုရင်) တစ်ကဲ့ ဓမ္မ အစစ်ကို သင်ပေးသူ (reference point) တစ်ခုအနေနဲ့ ကျေးဇူး (gratitude) ကို ကန်တော့တာပါ။ ဆည်းကပ်တာပါ။
အရေးကြီးဆုံး သင်ခန်းစာ တစ်ခုက၊ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာ ဘုရားရှင် ဆိုတဲ့ လူ တစ်ယောက်ကို aliens တွေ က create လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါမယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ created လုပ်ခဲ့တဲ့ လူဆိုတဲ့ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားက သူတို့ မသိသေးတဲ့၊ လူထပ်ဖြစ်စရာ မလို၊ aliens အပါအဝင် ဘာသတ္တဝါ မှာ ထပ်ဖြစ်စရာ လဲမလိုတော့တဲ့၊ အသက် ထပ်ဖြစ်စေတဲ့ cause တွေအားလုံးကို eliminate လုပ်လိုက်တဲ့ method ကို ရရှိသွားသူ၊ သူနဲ့မျိုးတူ လူသားဆိုတဲ့ species ကို လဲ အဲဒီ အသိဉဏ် (knowledge of Dhamma) ကို ဝေမျှပေးတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် နားလည်နှိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုစဉ်းစားလို့ ရတာက၊ ဟုတ်ပြီ၊ ဒီ အဆုံးအစ မရှိတဲ့ စင်္ကြာဝလ္လာထဲမှာ ရှိသမှ ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း၊ မနာလိုဝန်တိုခြင်း အစရှိတဲ့ energy တွေ ရှိနေသမျှ၊ အဲဒီ energy တွေက သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကို စုစည်းဆွဲစေ့ပြီး biological အစိုင်အခဲဖြစ်စေတဲ့ (သို့) ဘဝ ဖြစ်စေတယ်။
Biological အစိုင်အခဲဖြစ်တိုင်း သူနဲ့ corresponding ဖြစ်တဲ့ ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း၊ မနာလိုဝန်တိုခြင်း အစရှိတဲ့ energy တွေ ကို ဖြစ်စေတယ်။ ဒါကြောင့် biological အစိုင်အခဲဖြစ် ဖို့ အကြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။
ဒီ cause & effect cycle က ဆက်တိုက်လည်နေတာကို "သံသရာ" လို့ နားလည်ရမယ်။
ဒီ "သံသရာ" ကို အဆုံးသတ်ဖို့က ----
Biological အစိုင်အခဲ ဖြစ်ပြီမို့ မဖြစ်နဲ့လို့ ပြောလို့မရဘူး။
အဲ ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း၊ မနာလိုဝန်တိုခြင်း အစရှိတဲ့ energy တွေကို တော့ သတိနဲ့ မဖြစ်အောင်ရပ်လို့ရတယ်။
ရပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ နောက် biological အစိုင်အခဲ ထပ်ဖြစ်ဖို့ အားရင် ရော့နည်းစေတယ်။ တစ်ဖြေးဖြေးရော့ရာက လုံးဝ မဖြစ်တော့ရင်၊ biological အစိုင်အခဲ ထပ်ဖြစ်ဖို့ လုံးဝမရှိတော့ရင်၊ ဘဝ ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ် (နိဗ္ဗာန်)။
သို့ဖြစ်ပါ၍၊ သံသရာဆိုသည်က ကို ယုံကြည်ပါသည်။ သံသရာမှ လွတ်မြောက်ကြောင်း တရားများကို ကျွန်တော် ယုံကြည် လက်ခံပါသည်။
ဤသို့ သော မိမိ ကိုယ်တိုင် တွေးခေါ် စဉ်းစား မှု (self-investigation) ကို ဗဟိုပြုပြီး လောက၏ အမှန်တရားများကို ရှာဖွေရန်၊ ဆင်းရဲခြင်းများမှ လွတ်မြောက်ရန်၊ ဗုဒ္ဒဘာသာ ကို ရွေးချယ်ကိုးကွယ်ပါသည်။
Subject matterကို ပြန်ကောက်ရပါရင်၊ aliens or extraterrestrial beings တွေက လူဆိုတဲ့ species of mankind ကို engineered လုပ်ခဲ့သလား ကို သက်သေပြဖို့ထက်၊ Finding the Ultimate Truth က အရေးကြီးဆုံဖြစ်ပါကြောင်း။
(ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် ကိုရဲထွန်း (Cliff Lee) ရေးသားသော “ ဂြိုဟ်သား” ခေါင်းစဉ် အပိုင်း ၁။ ၂။ ၃။ အား စုပေါင်း
၍ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by ကိုအောင် at 16:133comments